China Amblyopia, Strabismus, Myopia Kudzidziswa, Eyesight Enhancer Model 19 Kugadzira uye Fekitori | SDK
Microcomputer chip control, super-hombe grating CAM yekuona basa, inoonekwa yakatarwa chifananidzo yakadzika, inoonekwa lens ndeyemaziso lens, inopindirana visual standard inogadziriswa, LED inotonhorera mwenje sosi mushure memufananidzo, tsvuku kupenya, mushure memufananidzo, yakaderera frequency pulse, yekuona yekukurudzira CAM, Fusion kudzidziswa. Bata amblyopia, pokugara myopia, strabismus, hyperopia, uye bvisa asthenopia muvachiri kuyaruka. Chishandiso chine mabasa akazara, mashandiro ari nyore uye inoshamisa mishonga yekurapa. Mushure memakore ekuongororwa kwekiriniki, chimbo chacho chakachengeteka uye chakavimbika pasina chero mhedzisiro. Mhedzisiro yekurapa amblyopia uye strabismus inoshamisa kwazvo.
✦ otomatiki nguva yekuita basa
Mushure mekusarudza iyo yekudzidzira modhiyo iwe yaunoda, chirongwa ichi chobva chango seta iyo nguva
✦ Kupindirana kwedaro kugadzirisa
Zvinoenderana nemamiriro eziso remwana, nhambwe iri pakati peziso inogona kugadziridzwa zvakakodzera, iri nyore uye iri nyore.
Therapy Red light kurapwa
Shandisa inoona tarisiro yekugadzirisa kudzidzisa fusion basa uye chiratidzo che stereo
Kutarisana nekugara myopia
Dzorera ciliary mhasuru uye bvisa kuona kuneta.
Simbisa kuvandudzwa kwemaseru emakoni uye nekuvandudza kwepakati chiratidzo.
Kudzidzisa matatu matanho ekuona mabasa: panguva imwe chete, fusion, uye matatu-matatu.
Treatment Grating kurapwa
Grating therapy inogona kukurudzira iyo optic nerve uye kugadzirisa matambudziko ekuona.
Paunenge uchiita grating kurapwa, zvinokurudzirwa kuti uite kurapwa pasi pemamiriro echiedza chakanaka. Batidza nesefa chinja (0 chinzvimbo) uye nesefa ndiro iri kurudyi kwechiridzwa inotanga kutenderera zvishoma nezvishoma. Hazvikurudzirwi kuita grating kudzidziswa kweiyo myopia.
✦ Mushure mekurapa kurapwa
Natsiridza inoonekwa mashandiro eiyo macular nharaunda uye shandura iyo paracentric kutarira mukati repakati kutarisa.
Kunyoresa nhamba yekuisa magetsi: AC220V
Maumbirwo uye kuumbwa : PBH-19 mhando chigadzirwa chinonyanya kuverengerwa neyakagamuchirwa uye yeziso mask, kupomba upamhi <1ms, kupomba amplitude <25v, kutsvuka kujekesa: 197Lx, chena kuvhenekera: 671Lx
Makuriro ekushandisa Ichi chigadzirwa chakakodzera pakurapa amblyopia, pokugara myopia, uye strabismus muvachiri kuyaruka
Pashure: Portable Vision Screener Cvsx
Zvadaro: Yakazara otomatiki kufa-yemahara edging muchina FC-600FE-600
Amblyopia Kudzidzisa Mudziyo
Amblyopia Kudzidzisa Midziyo
Strabismus Kudzidzisa Midziyo